नीति र नेतृत्वबीच तालमेल नमिल्दा देश भद्रगोलतर्फ : डा. भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिका एजेन्डा अपहरणमा परेपछि मुलुकमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको तर्क गरेका छन् ।
वृहत् शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको दिन शुक्रबार ट्वीट गर्दै उनले उक्त सम्झौतालाई स्मरण गर्दै नीति र नेतृत्व नमिलेपछि नेपालमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले नयाँ पुस्ताले शान्ति सम्झौताको पूर्ण पाठ पढ्नुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक जननी जनयुद्ध र बृहद शान्ति–सम्झौता (जसमा मधेस जनविद्रोहलगायत पूरक बनेका थिए) लाई बिर्सेर वा अवमूल्यन गरेर देश अघि बढ्दैन है,’ उनले लेखेका छन्, ‘नयाँ पुस्ताले शान्ति सम्झौताको पूर्ण पाठ पढून् ।’
प्रकाशित मिति : मंसिर ५, २०७७ शुक्रबार १४:३३:५८, अन्तिम अपडेट : मंसिर ५, २०७७ शुक्रबार १४:३५:५९